Design Ukuqamba - Ningbo Runner Co., Ltd.
R & D UKUKHONA
I-Ningbo Runner ineqembu eliqeqeshiwe elinezinjiniyela eziningana ze-R & D ezibandakanyeka emkhakheni wokuhlanzwa kwezinto ezintsha, ukwakhiwa kwezimboni, ukwakheka kwesikhunta, ukulawula okuzenzakalelayo, ukuhlaziywa kokuhlolwa nokuphathwa kwephrojekthi, okunikeza ukusekelwa okuhle kwemisha ezimele ye-WRN nempumelelo yezobuchwepheshe.
Ukuncika eqenjini layo eliqinile le-R & D nokuhlangenwe nakho okucebile ekuthuthukiseni umkhiqizo nasekuklanyeni, ukukhiqizwa komkhiqizo weNkampani nokulawulwa kwekhwalithi kungahlangabezana namakhasimende futhi kuthengiswe kangcono.
UKWAKHIWA KWEZIMBONI UKWENZA
Ithimba Lokwakhiwa Kwezezimboni likhiqiza imisebenzi eminingi emihle kakhulu ngekhwalithi yokuklama yobuchwepheshe minyaka yonke. Ithimba linikeza amakhasimende uchungechunge lomkhiqizo osezingeni eliphakeme osebenza ngezinqubo ezinjengecebo lephrojekthi, ucwaningo lomqondo, ukwakhiwa komkhiqizo, isixazululo, ukwenziwa kwezimboni, ukukhiqizwa kokukhiqiza, ukupakisha umkhiqizo kanye nokuxhumana okubukwayo. Okwamanje, isungule ubudlelwano bokusebenzisana besikhathi eside namathimba wokuklama ezimbonini eJalimane, eSweden, eHong Kong naseTaiwan ukusebenzisa njalo ubuchwepheshe obusha nemicabango yokuklama emikhiqizweni emisha.
IZINSOMBULUKO EZININGI ZOKUQONDA UHLELO
Ukuvakasha kwezebhizinisi, idatha yeMakethe nokubika ukuphenya, i-Runner ihlala phambili kwamakhasimende, futhi iwasize ahlole amathuba amabhizinisi amasha futhi aklame imikhiqizo emisha. Sikholwa ukuthi noma ngabe ikusasa lishintsha kanjani, ikhono lethu lokusebenza, ukuqamba kanye nekhono locwaningo, liyisiqondiso esisiphishekelayo, "impumelelo yamakhasimende" umgomo wethu wokugcina.